ESI EWEPỤ KỌMPUTA SITE NA KỌMPUTA - UTORRENT - 2019
Kọlọtọ (BO) bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ nke na-eme ka ọ dị mfe idetuo na ịnyefe ọ bụla, ọ bụghị ihe ederede, ozi. Site na ndabara, ọ bụ naanị data e depụtaghachiri nwere ike kpochapụrụ, na ihe a depụtaghachiri na mbụ ga-ehichapụ site na windo. O doro anya, nke a adịghị mfe maka ndị ọrụ na-ejikọta ọtụtụ ozi dị mkpa ka a kesaa n'ime mmemme ma ọ bụ Windows n'onwe ya. N'okwu a, enyemaka ndị ọzọ ga-enye site na ohere ndị ọzọ maka ịlele BO, mgbe ahụ ọ ga-atụle kpọmkwem banyere ha.
Lelee windo na Windows 10
Ndị mbido ekwesịghị ichefu banyere ike kpochapụle anya na igodo n'elu - kpozie faịlụ a depụtaghachiri n'usoro ihe omume nke na-akwado usoro a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị depụtaghachiri ederede, ịnwere ike ịlele ya site na ịgafe ya na mpaghara ọ bụla ederede nke usoro ihe omume ma ọ bụ n'ime ihe odide ederede. Ọ kachasị mfe iji meghee ihe osise a na Paint, ma tinye faịlụ niile n'ime ngwa Windows dị mma na folda ma ọ bụ na desktọọpụ. Maka ikpe abụọ mbụ, ụzọ kachasị mfe bụ iji ụzọ mkpirisi keyboard. Ctrl + V (ma "Dezie"/"Na-edezi" - "Tapawa"), na maka nke ikpeazụ - kpọọ ebe ederede na iji oke "Tapawa".
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ Windows na-arụ ọrụ oge dị anya na-arụ ọrụ dị iche iche na-echeta na enweghi ike iji ya mee ihe ngosi, ọ bụ na ọ dịkarịa mgbe mgbe ụfọdụ ihe ọmụma bara uru nke furu efu, nke onye ọrụ ahụ depụtara, mana echefuru ịchekwa ya. Maka ndị chọrọ ịgbanwe n'etiti data depụtaghachiri na BO, ọ dị mkpa iji wụnye ngwa ndị ọzọ, na-eduga akụkọ ihe mere eme nke ịdegharị. Na "top iri", ị nwere ike ime ya n'enweghị ya, ebe ọ bụ na ndị mmepe Windows agbakwụnyela ọrụ nlele. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ịmara na na njikwa ọrụ ọ ka dị ala karịa ndị ibe ọzọ, nke mere ọtụtụ ndị ji anọgide na-eji ngwọta sitere n'aka ndị na-emepụta software. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na nhọrọ abụọ ahụ, ị ​​ga-atụle ma họrọ nke kachasị mma maka gị.
Usoro 1: Usoro nke atọ
Dịka e kwuru n'elu, mmemme sitere n'aka ndị mmepe dị iche iche nwere ohere dị iche iche, nke ndị ọrụ nwere ike ọ bụghị naanị na-ele ihe ole na ole ole edere, ma gosipụta data ndị dị mkpa, mepụta nchekwa niile ha, nweta akụkọ ihe mere eme site na mbido ma melite mmekọrịta ha. na ịzụ ụzọ ndị ọzọ.
Otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu bụ nke gosipụtara onwe ya bụ Clipdiary. Ọ bụ njedebe, ebe na mgbakwunye na nke dị n'elu, enwekwara ịtinye ederede na ederede na-ezighị ezi na nhọrọ onye ọrụ, ịmepụta ndebiri, weghachite data agbakwụnyere ehichapụ, na-ekiri ozi enwetara na windo a na-edozi, na njikwa na-agbanwe agbanwe. O di nwute, ihe omume a enweghi onwere, ma o nwere oge ikpe ikpe 60, nke ga-enyere aka ịghọta ma ọ bara uru ịzụrụ ya na-adịgide adịgide.
Download Clipdiary site na saịtị ọrụ
Ibudata ma wụnye usoro a na mbu, wee mee ya.
Dezue ntọala mbụ iji mee ihe n'ọdịnihu. Ozugbo ọ bara uru ịkọwa na ihe ọ bụla e depụtaghachiri ebe a na-akpọ "clip".
Na window mbụ, ịkwesịrị ịhọrọ igodo ụzọ dị mkpirikpi iji mepee windo Clipdiary ngwa ngwa. Hapụ uru bara uru ma ọ bụ debe ihe a chọrọ. Ihe nlele akara na-agụnye nkwado maka igodo Win, nke na-echebe site na iji aka na-emechi ihe e nyere. Ngwa ahụ na-esikwa na windo Windows, ebe ọ na-ada ada ọbụna mgbe ị pịa obe.
Gụọ ntụziaka dị mkpirikpi maka iji ma gaa n'ihu.
Ugbu a, a ga-enye ya ka ọ rụọ ọrụ. Jiri nkwenye ma ọ bụ tinye igbe ahụ "Amatara m otú e si arụ ọrụ ahụ" ma gaa nzọụkwụ ọzọ.
Iji mee ngwa ngwa tinye ihe na clipboard, na-eme ka ha na-arụsi ọrụ ike, usoro ihe omume ahụ na-enye gị idozi ụzọ mkpirisi abụọ keyboard.
Iji mee ka ihe omuma ohuru wee meghee akwukwo omume.
Ị ga-ahụ isi windo Clipdiary. N'ebe a, a ga-echekwa akụkọ ihe mere eme site na akwụkwọ gị na ndepụta site na ochie gaa ọhụrụ. Ngwa ahụ na-echeta ọ bụghị naanị ederede, mana ihe ndị ọzọ: njikọ, foto na faịlụ ndị ọzọ multimedia, nchekwa niile.
Site na iji ụzọ mkpirisi, ị nwere ike ijikwa niile echekwa. Dịka ọmụmaatụ, iji tinye otu n'ime ihe ochie ahụ na clipboard, họrọ ya na bọtịnụ òké aka ekpe wee pịa Ctrl + C. E depụtaghachiri ihe ahụ, windo mmemme ahụ mechie. Ugbu a ị nwere ike itu ya ebe ị chọrọ ya.
Iji tinye otu ngwa ngwa, ị ga-achọ ime ka windo a rụọ ọrụ (gbanwee gaa na ya), wee mepụta Clipdiary (na ndabara, Ctrl D ma ọ bụ site na tray). Mepee ntinye chọrọ wee pịa Tinye - ọ ga-apụta ngwa ngwa, dịka ọmụmaatụ, na Notepad, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtinye ederede n'ebe ahụ.
Oge ọzọ ịmalite n'ime oge Windows ahụ, ị ​​ga-ahụ na a ga-emesapụta faịlụ ahụ edere na obi ike - ọ na-egosi niile "obere vidiyo" echekwara na ịdebere na clipboard.
Idebe ihe oyiyi nwere ike ịbụ obere ihe siri ike. Maka ihe kpatara ya, Clipdiary anaghị anakọta ihe oyiyi na ụzọ ndị dị elu, ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na echere foto ahụ na PC ma usoro ahụ n'onwe ya na-eme site na interface nke usoro ihe omume ahụ.
Ihe oyiyi enịm na clipboard bụ viewable, ma ọ bụrụ na ị họrọ ya na otu pịa na LMB, windo nwere ikepụta ga-apụta na ọkwa.
Na njirimara ndị ọzọ a na-ewere dịka nhọrọ, ị nwere ike ịchọta ya n'onwe gị ma hazie usoro ihe omume ahụ n'onwe gị.
Dị ka ihe atụ nke ngwa a, anyị nwere ike ikwu ma ọ dịkarịa ala (na ọbụna karịa ihe) arụ ọrụ na analogues free na ihu CLCL na Free Clipboard Viewer.
Usoro nke 2: Ejiri ya na Mbadamba
Na otu n'ime mmelite ndị dị mkpa, Windows 10 mesịrị nweta onye na-elele windo na-arụ, nke enyere naanị ọrụ ndị dị mkpa. Naanị ndị nwere nsụgharị 1809 na n'elu nwere ike iji ya. Site na ndabara, enweelarị ike na ntọala OS, ya mere ọ bụ naanị iji kpọọ ya site na ntinye zọpụta pụrụ iche maka ya.
Pịa igodo Nchikota Mmeri + Vimeghe bo. Ihe niile e depụtaghachiri na-enye iwu site na oge: site na mgbe ochie.
Ị nwere ike idetuo ihe ọ bụla site na ịpịgharịa ndepụta ahụ na wiil òké na ịpị ntinye achọrọ na bọtịnụ òké aka ekpe. Otú ọ dị, ọ gaghị ebili n'elu ndepụta ahụ, kama ọ ga-anọgide na ya. Otú ọ dị, ị nwere ike itinye ya n'ime mmemme nke na-akwado usoro a.
Ọ dị mkpa ịmara na mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ, a kwụsịrị kpamkpam ihe ngosi Windowsboard. Ị nwere ike ichekwa ihe ndekọ ọ bụla na-eji akara pin. Ya mere, ọ ga-anọ ebe ahụ ruo mgbe ị ga-ewepụ ya site n'otu ihe ahụ. Site n'ụzọ, ọ ga-aga n'ihu ọbụlagodi na ị kpebiri iji aka gị dozie BO.
Akwụsịla log a site na bọtịnụ kwekọrọ. "Kpochapu Nile". A na-ehichapụ ndenye ọ bụla na obe mbụ.
Oyiyi enweghi ihuenyo, ma a na-azoputa ha dika obere nchoputa, nke na enyere ha aka ighota ha na ndepụta ndi mmadu.
A na-emechi windo clip ahụ na bọtịnụ nkịtị nke bọtịnụ òké aka ekpe n'ebe ọ bụla ọzọ na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara na BO nwere nkwarụ, ịnwere ike ịgbalite ya n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Meghee "Nhọrọ" site na ọzọ "Malite".
Gaa na ngalaba "Usoro".
Na oghere aka ekpe, chọta "Mbadamba".
Gbanye ngwá ọrụ a ma nwalee ọrụ ya site n'ịkpọ windo ya na aha a na-akpọ aha ya.
Anyị atụlewo ụzọ abụọ nke esi emepe windo na Windows 10. Dịka ị hụla, ha abụọ dị iche na ọkwa nke arụmọrụ ha, nke mere na ọ gaghị esiri gị ike ịhọrọ usoro maka ịrụ ọrụ na windo na-adọrọ gị mma.